Obodo Sanliurfa Ime Obodo | RayHaber | raillynews
HomeObodo Obodo Metropolitan
Ọ Joyụ n'ụzọ dị na Viranşehir
Şanlıurfa Obodo na-aga n'ihu na-arụ ọrụ na-ewu okporo ụzọ dị mma n'ọtụtụ mpaghara n'ime mmemme n'okporo ụzọ ime obodo. Obodo obodo a keleela ọha mmadụ site n'ịgbanwe ụzọ ndị dị n'okirikiri, ndị merela agadi ka ha bụrụ ụzọ ndụ ga-adịgide adịgide. [More ...]
Mbara Igwe nke Mbara Igwe nke Mbara Igwe na Emmanuelgan ije
Şanlıurfa Metrolọ Ọrụ Obodo Obodo guzobere sistemụ akara mkpanaka nke sitere na anyanwụ, nke mbụ na Şanlıurfa, iji chọta ụzọ maka nchekwa ụzọ na njupụta nke ụgbọala na Atatürk Boulevard. Site na ntinye aka nke Onye Isi Obodo Mayor Zeynel Abidin Beyazgül [More ...]
Şanlıurfa Mpụga Obodo Ejiri Ezigbo Nkporo
Obodo Obodo Şanlıurfa na-enye okporo ụzọ mebiri emebi, ụzọ ochie maka ọrụ ụmụ amaala site na ịkwado ha okporo ụzọ ihe ga-adịgide adịgide. Şanlıurfa Obodo isi obodo rụpụtara ezigbo okporo ụzọ na-adịte aka ma na-adịgide. [More ...]
A malitere ime ihe nkedo na Karakoyun Bridge Interchange na Viaduct, onye ndi Şanlıurfa Ulo Oru obodo na-agba oso. Ọkpụkpụ vọd ahụ dị na ụzọ ga-agafe, bụ nke akụkụziri akụkụ ya iji jeere ụmụ amaala ozi, na-aga n'ihu ngwa ngwa. Şanlıurfa okporo ụzọ [More ...]
Ọjụjụ Sanliurfa Rail System Tender Claims
Site na nkwupụta nke Şanlıurfa Metropolitan Municipality, gọọmentị maka usoro ụgbọ okporo ígwè dị nde 455 TL na akwụkwọ akụkọ mba. Şanlıurfa Obodo ukwu nke akpọrọ “Nkọcha endergba Ederede Ego Nde 455” n'akwụkwọ akụkọ mba. [More ...]
Sanliurfa Metropolitan Municipal, iji gbochie njupụta nke okporo ụzọ n'ime obodo n'okpuru oghere mmeghe na mgbasawanye na-arụ ọrụ n'etiti ogo 50 gbasaa Sanliurfa-Akcakale okporo ụzọ na-agafe mgbe obere oge gasịrị. [More ...]
A na-enyocha njem ndị njem na azụ na Şanlıurfa
Obodo polanlıurfa polanlıurfa nyochara ndị njem na ụgbọ mmiri azụ n'okporo mmiri ndị Atatürk na Birecik Dam. Nnyocha mmiri na-eme kwa afọ nke ndị njem na ụgbọ mmiri na-akụ azụ na Halfeti, Birecik, Bozova, Hilvan, Siverek [More ...]
Anaghị agafe Ọrịa Noise na Sanliurfa
Obodo Sanliurfa, nke dị na etiti ndị na-anya bọs ọha na eze nke butere mkpọtụ site na ịnakọta mpi ikuku. Ndị uwe ojii jikọrọ ụgbọ ala ọha nke Sanliurfa na ndị uwe ojii [More ...]
Isi obodo nke Karakoyun Junction, Acfelement Work
Ndị otu Sanliurfa Metropolitan Municipality, ndị weghaara ntụgharị mgbanwe nke Karakoyun Bridge na ntuziaka nke Mayor Beyazgül, mere ka ọrụ ha dịkwuo elu n'ọhịa iji gbochie ụmụ amaala ahụ inwe nsogbu na njem mgbe ha kwụsịrị ọrụ ndị ahụ. Sanliurfa ga-eme ka okporo ụzọ dịtụ mfe [More ...]
Ụzọ mgbaba na slip Road Works Start
Onye isi ala Zeynel Abidin Beyazgül, onye nyochara n'okporo ụzọ dị na Karaköprü ebe mgbawa na mkpọda n'ihi oke mmiri ozuzo n'oge oyi, 1 bidoro n'April site n'enyemaka nke ndị enyi ọrụ aka anyị wee mezue usoro nkwụchi echi. [More ...]
Ụlọ ọrụ Sanelurfa Children Traffic Training bụ nso
Şanlıurfa Metropolitan Municipality mere na mgbe a obere oge maka ozi ahụ malitere, nke ga-ọkọnọ ka ụmụ amaala na Turkey kasị ukwuu korota Paving ọrụ n'oge a Ụmụaka Traffic Training Park. Turkey ntà [More ...]
Ebinye aka na mmekorita aka n'etiti Şanlıurfa Obodo ukwu na Şanlıurfa Nnyocha Nleba Anya na ordanlıurfa (YİKOB) maka ọrụ ndị a ga-achọpụta na oke nke "Ọrụ Ọdịmma Obodo". Site na mmemme a na-eme n’ụlọ ezumezu nke Governorate, Şanlıurfa Metropolitan [More ...]
Ihe ndi accelerated na Şanlıurfa Ogige Nkụzi Okporo Ụzọ Ụmụaka
Mayoranlıurfa Isi Obodo nke Obodo Zeynel Abidin Beyazgül, achọpụtara na-aga n'ihu na ngalaba Oru Ọmụmụ Ga-ahụ Maka fficmụaka. Iji mee ka nsogbu nke okporo ụzọ dị na Şanlıurfa mee ka nsogbu dị, okporo ụzọ na-agafe agafe, n'okporo ụzọ na-agafe agafe. [More ...]
Sanliurfa Aslfat Oge dị mkpa
Ngalaba Ngalaba Sayensị nke Sanliurfa nke sayensi rụchara ọrụ nke boulevards na sọsọ asphalt boulevards mepere ka okporo ụzọ. Ebumnuche iji mee ka okporo ụzọ obodo dị mma site na okporo ụzọ mepere emepe na boulevard na-arụ na etiti na mpaghara Şanlıurfa [More ...]
Igbe nyocha nke ụgbọ mmiri na Sanliurfa
Ebumnuche nke ebumnuche njem nke Mịnịsta na-ahụ maka njem ụgbọ ala bidoro site na nhazi nke ndị obodo Sanliurfa Amamịghe Ship License Agụmakwụkwọ ọzụzụ. Ndị ụlọ ọrụ ebumnuche wepụtara ga-enweta otu Nde [More ...]
Ụgbọ njem na ụmụ akwụkwọ YKS na Şanlıurfa Free
Şanlıurfa Metropolitan Municipal ga-enye ọrụ ụgbọ njem n'efu maka ule YKS nke a ga-enwe na ngwụsị izu. Ka emechara nkwadebe nke Obodo Obodo, o kpebiela ụzọ na ụzọ dị iche iche. Mpempe, Nhọrọ na Ebe Ntinye (OSYM) site na 15 [More ...]
Ụgbọ njem ndị njem na-agafe na Sanliurfa
Sanliurfa Obodo ukwu, ndị Sanliurfa ka ha wee na -eme mmemme oriri na ọ aụ Ramadanụ na ntụsara ahụ udo na-ewere obodo niile. Xbọchị 3 nke ezumike bụ n'efu ka ụmụ amaala mee ka nleta ha dị mma [More ...]
Site n'Ịntanet Na-arụ ọrụ n'onwe gị
Emechara site na ime obodo Sanliurfa Auto Galericiler saịtị nke ọrụ asphalt. Mgbe ọrụ ndị ahụ ga-arụcha n’oge na-adịghị anya, okporo ụzọ na ụzọ ụgbọ njem ga-adị zuru ezu. Şanlıurfa Ime Obodo, [More ...]
Oge Asphalt Amalite na Şanlıurfa
Dika ihu igwe siri dị mma, Şanlıurfa Metropolitan Obodo bidoro oge asphalt. Mayor Beyazgül onye lekọtara ọrụ bidoro na Batıkent District nke Karaköprü District kwuru, olarak Dị ka Onye Isi Obodo [More ...]
Usoro Ọhụụ Rail System nke Şanlıurfa
314 na ọnụ ọgụgụ nke ugbo ala na ọha iga, nke nwere otu n'ime Turkey kasị ukwuu nsoro nke Şanlıurfa Municipality, iji nye mma ọrụ maka ụmụ amaala na-ewere nzọụkwụ ke ìhè tren njem. [More ...]